P2.6 hd မိုးလုံလေလုံပါးလွှာပြီးအပြည့်အ ၀ အရောင်အပြည့်ငှားရမ်းခြင်းကြောင့်ကြော်ငြာအတွက် display မျက်နှာပြင် - တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးငှားရမ်းခမှာ ဦး ဆောင်သောဗီဒီယိုနံရံကပ်စက်ရုံ
Fast Led Co. , LTD
SKW စက်မှုဇုန်, ရှီယန်မြို့, Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမြို့, တရုတ်
တယ်လီ:+86 755 89422890
LED Display မျက်နှာပြင်များသည်ပရိသတ်များကိုကြည်လင်ပြတ်သားသောဓာတ်ပုံများပို့ဆောင်ပေးသည်. ယခု ဦး ဆောင်သောမျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်သည်အဖြစ်အပျက်မျိုးစုံတွင်ပါ ၀ င်မှုပိုများလာသည်. နေပါစေကကွန်ဖရဖြစ်ပါတယ်, ဖျော်ဖြေပွဲ, live show, အားကစား, ရွေးကောက်ပွဲ, စင်မြင့်, သို့မဟုတ်အခြားသူများ, rental led display screen is with high-resolution, မြင့်မားသောလတ်ဆတ်မှုနှုန်းနှင့်မြင့်မားသောဆန့်ကျင်ဘက်အချိုးဏ
1. ကွဲပြားခြားနားသော panel ကိုအရွယ်အစားအသုံးပြုမှုကိုရောနှောနိုင်ပါတယ်.
P2.6mm မိုးလုံလေလုံငှားရမ်းမှု ဦး ဆောင်သောမျက်နှာပြင်သည်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိသည်, 500x500mm နှင့် 500x1000mm, 0.5mx0.5m 10 အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်×4.5မီတာအရွယ်အစား, but 500x1000mm solution will use less receiving card to reduce cost. ဖောက်သည်တစ်ချို့ကဒီ model နှစ်ခုကိုအတူတူဝယ်ပါလိမ့်မယ်, ရောနှောအသုံးပြုခြင်းကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်များအတွက်အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်, နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ.
အလူမီနီယမ်သွန်းလောင်းခြင်းသည်သည်းခံနိုင်မှုနည်းသည် , ချောမွေ့စွာတပ်ဆင်အောင်မြင်ရန်သကဲ့သို့တိကျတဲ့လက်လှမ်းမမီ± 0.05m. ပုံမှန်ဗီရိုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပိုမို၍ ကြည့်။ ကြည့်နိုင်သည်.
3. Modular နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်; very easy to maintain
ကက်ဘိနက်နှင့် module အတွက်ဖဲကြိုးကြိုးများမရှိတော့ပါ. အရာအားလုံးဟာ PCB အချက်အချာပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်. ကေဘယ်လ်ကြိုးလျော့နည်းခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောပြproblemsနာများဖြစ်သည်. ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုဖျက်သိမ်းစရာမလိုပါ. အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကိုထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက်သီးခြားစီခွဲထုတ်နိုင်သည်.
(သေးငယ်သော pixel pitch 2.6mm) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် :
Pixel အသံ 2.6မီလီမီတာ
module resolution ကို 192*48အစက်
module အရွယ်အစား 500*125မီလီမီတာ
ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား(W * H ကို *: D) 500*500*70မီလီမီတာ
ကက်ဘိနက် Pixels 36864အစက်
ပစ္စည်း Casting လူမီနီယံ
တောက်ပ ≥1200cd / m2
Pixel သိပ်သည်းဆ 65536အစက် / m2
ယာဉ်မောင်းနည်းလမ်း 1/16 စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ scan ဖတ်
ကြိမ်နှုန်း Frame 60Hz
input ဗို့အား AC100 – 240V / 50Hz
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု မက်စ်:160W / ကက်ဘိနက်ပျမ်းမျှ:80ကက်ဘိနက်
မျက်နှာပြင်အလေးချိန် 8.5ကီလိုဂရမ် / ကက်ဘိနက်
သင်၏အကောင်းဆုံး LED Video Wallution ဖြေရှင်းချက်ပေးသူ
မိုးလုံလေလုံသို့မဟုတ်ပြင်ပမှ led screen များလိုအပ်သည်? အကျယ် / အမြင့်အရွယ်အစား? ဇာတ်စင်ဖြစ်ရပ်များအတွက်အသုံးပြုသို့မဟုတ်မြို့ရိုးပေါ်မှာ fixed?
ဗီဒီယိုနံရံအတွက်ဗီဒီယိုနံရံအတွက်ကြီးမားသောသံလိုက်မော်ဒယ် p5 LED display
HD LED ဖန်သားပြင်အတွင်းပိုင်း P3 P6 ဦး ဆောင်ကြော်ငြာသည်မျက်နှာပြင်
p4 hd ဇာတ်စင်ကြော်ငြာအတွင်းပိုင်းပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်သောမျက်နှာပြင်ပြဗီဒီယိုနံရံတွင် smd
p3.91 မိုးလုံလေလုံeventရာမဖြစ်ရပ်ဇာတ်စင်ကြော်ငြာသည်ဖျော်ဖြေပွဲအတွက် display screen panel ကို ဦး ဆောင်သည်
စျေးပေါစျေးနှုန်းမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကြီးမားသောတီဗီ P3 မိုးလုံလေလုံငှားရမ်းကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ် ဦး ဆောင်ဖန်သားပြင်
P4.81mm မိုးလုံလေလုံငှားရမ်းမှုမှာ display 3840hz refresh rate ကိုရရှိခဲ့သည်
စက်ရုံစျေးနှုန်းအရည်အသွေးကောင်း Ultra ပါးလွှာပေါ့ပါးသောမိုးလုံလေလုံ led led display p5 led video wall screen